Friday 17th of September 2021 / 12:34:46 AM
२. धेरै समय बाहिरी बाताबरणमा का
यौन इच्छा दबाएर राखे कस्तो असर पर्छ ?
काठमाडौं । चाहान भएर पनि यौन इच्छा पुरा नगर्दा बिभिन्न समस्याहरु हुने कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ । ब्यबहारिक जिवनमा पनि तपाईं हामी यसको अनुभव गर्न सक्छौ ।
कुनै निश्चित सिमामा रहेर, समाजिक मर्यादा पालना गर्दै बिभिन्न माध्यमबाट
यौनको मामलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्रा तथा तथा गन्
पुरुष बेश्याको माग बढ्दै, यसकारण महिलाहरु रोज्छन पुरुष बेश्या
बेलायतकी ४२ वर्षीया शारलोटले पहिलोपटक पुरुष बेश्या (मेल एस्कार्ट) अर्थात जिगोलोको सुवा लिइन् तब यसको कारण निकै साधारण थियो, अर्थात कुनै पनि प्रकारको भ्रमबाट बच्नु । उनी भन्छिन्–केही वर्ष पहिला मैले पहिलो पटक पुरुष बेश्याको सेवा यौन चाहना पूर
यास्मिन (परिवर्तित नाम)
एजेन्सी, १२ कात्तिक । भनिन्छ, एउटा तस्विरले हजार शब्द बयान गर्छ । तर, अहिले यतिबेला एउटा फोटो श्रृंखलाले कुनै विषयको बखान मात्र होइन, एउटा दरिलो सन्देश दिन खोजिरहेको छ । यौन अहिले पनि वर्जित विषय मानिन्छ । महिलाको हकमा त यसबा
अश्लील चलचित्र हेर्ने गर्नुभएको छ ? एकपटक यो पढ्नुहोस्
अनलाइन दर्पण 2017-10-07
काठमाडौं। आजभोली ईन्टरनेटको जमाना छ । त्यसकारण अश्लिल चलचित्र हेर्दै नहेरेको पुरुष भेट्न त गाह्रो नै पर्छ । तपाई पनि हेर्नुहुन्छ होला । अश्लिल चलचचित्र हेर्ने पुरुषका सम्बन्धमा एउटा नयाँ अध्ययन भएको छ र त्यस अध्ययनले अनौठो निष्कर्
ओठबाट यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ महिलाको गोप्य यौन व्यवहार
ओठलाई महिला सौन्दर्यको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ । गुलाबी ओंठ त महिलाहरुका लागि झनै आकर्षक मानिन्छ । जस कारण पनि अधिकांश महिलाहरु आफ्नो ओंठ प्रति निकै सजक र सतर्क रहँदै आएका पाइन्छन् ।
तर ओंठ खाली सौन्दर्यको खास पहिचान मात्र रहेन । ओंठले
सेक्सका दौरान फोरप्ले अर्था
नेशनल सर्वे अफ सेक्सुअल एटीट्युड्स एण्ड
यसकारण महिलालाई याैन सम्पर्कका बेला कन्डमको प्रयोग मन पर्दैन
अनलाइन दर्पण 2017-08-27
एजेन्सी । सेक्स एउटा यस्तो चीज हो जसको इच्छा प्राय सबैमा हुन्छ । एउटा उमेर लागेपछि सेक्सप्रति जो कोहीको रुची जान्छ । उमेर पुगेपछि शारिरीक सम्बन्ध बनाउनका लागि युवा युवतीहरु तयार हुन्छन् ।
यो स्वभाविक पनि हो । यो हरेकले जान्नु आवश्यक छ कि से
अनलाइन दर्पण 2017-08-15
महिलाको र पुरुषका आ आफ्नै रुची हुन्छन । त्यसमा पनी पुरुषका भन्दा अझ धेरै थरी रुची महिलामा हुने गर्छन । बिभिन्न खोज बाट यहि तथ्य बाहिर आयको छ । हामीले पहिलाका स्तम्भहरुमा पनि सेक्स सम्बन्धी बिभिन्न रोचक जानकारी दिने गरेका छौ । आज पनि हामीले यस्तै र
दश बज्न दश मिन
म कपिलवस्तुको एउटा गाउँमा जन्मिएर त्यही हुर्किएकी केटी । सानो छँदा अत्यन्त चन्चले स्वभावकी थिएँ । कहिलेकाहिँ मामाघर (दाङमा) गएका बेला म नाचेर नै समसय बिताउने गर्दथेँ । उपद्रो गर्ने र बोलिरहने मेरो स्वभावले मामाघरमा कत्तिलाई दिक्कलाग्दो बनाउँदो हो
महिलाले पनि गर्छन हस्तमैथुन । कसरी गर्छन् महिलाले हस्तमैथुन ?
महिलाले पनि हस्तमैथुन गर्छन भनेको सुन्दा धेरैलाइ अच्चम्म लाग्न सक्छ । बरु बैकल्पिक यौन सम्बन्धमा सबै भन्दा सुरक्षित मानिन्छ हस्तमैथुन । किनकि हस्तमैथुन एकल यौनक्रियाकलाप हो । यौनक्रियाकलापका बारेमा गरिएका खोज अनुसन्धान अनुसार स्वस्थ्य र सुरक्षित य
विभिन्न अध्ययनले अधिकांस युवायुवतिहरु यस्तो सपना देख्न चाहन्छन् जहाँ उनीहरुको आफ्नो प्रियजनसँग भेटहोओस् र यौनक्रिडा गर्न पाइयोस् । त्यसैले सपनामा कोहीसँग सम्भोग गरेको देख्नुलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ ।हामी धेरैले यसलाई हल्का रुपले लिन्छौँ र किन यस्त
यौनसम्पर्कको सामान्यतया चार चरणहरू हुन्छन् उत्तेजना (Excitement), धारण (Plateau phase), चरम आनन्द (Orgasm), सम्पन्नता (Resoluton) को चरण । जब मानिसमा यौन चाहना आउँछ, त्यतिबेला स्नायु प्रणाली क्रियाशील हुन्छ । उत्तेजना हुँदा शरीरले एड्रिनलिन (Adren
चिनीरोग र यौनजीवन
- डा खेम कार्की
यौन सम्पर्क गर्ने इच्छा त थियो नि तर के गर्नु लिङ्ग उत्तेजित नै हुदैंन ।’ यस्तो समस्यासँग बाँचिरहेका मानिसहरूको जीवनलाई सम्झौँ त ! कति पीडा होला । यस्तो किन हुन्छ ?
अहिले विश्वका हरे
विद्यालयमा हुने बाल यौनदुर्ब्यवहार: शिक्षकले जान्नु पर्ने कुराहरू
अनलाइन दर्पण 2017-05-29
बालबालिकाहरु सबै भन्दा धेरै समय प्रत्यक्ष सम्बन्ध अभिभावकहरु भन्दा शिक्षकहरुसँगै हुन्छन र बानी व्यवहारहरु प्राय विद्यार्थीहरुको अभिभावकलाइ भन्दा शिक्षकहरुलाइ नै थाहा हुन्छ । त्यसंले आफ्नो बच्चाको बारेमा सल्लाह लिन शिक्षकहरुसँग सम्बन्ध राख्दछन । कि